Madax adaygii col:c/laahi yuusuf iyo dowladii somaliyeed
Diyaariye :Mohamed Mohamoud Osman (Qoordheere)
Shirka ka socday wadanka kenya muda 2sano ah kadib ayaa waxay lagu soo doortay col:c/laahi yuusuf axmed inuu noqdo madaxwaynaha wadanaka somalia 5sano ee soo socda ,inkastoo ay dowaladii uu ka ahaa hogaanka c/laahi ane soo dhaafib weli kenya iyo yeman .
Dadka somaliyeed ayaa waxay inataa u jeedaan wixii kasoo bixilahaa dowlada uu hoogamiye ka yahay c/lahi inay timaado wadanka gudihiisa walow uu c/lahi ka dhigaty saldhig yeman iyo kenya taasna waxay ku tusaysaa madax adayg ,kalsooni daro iyo maamul xumo awgeed .
Hadaba waxaaa is waydiin mudan dowalada c/laahi xagee weeye fadhigeedu ma yeman baa ,Jabuuti mase waa kenya .?!!!!
Hadaba jawaabto waa MAYA ..MAYA MAAHA ...Saldhig waxaa u ah dowlada somalia muqdhisho .
C/laahi yuusuf oo ay dadku ku tilamaamaan madaxadayg ,maamulxumo,keligii tashade iyo amxaaro jacayl ....ayaa hadalkii umada somaliyeed ay ku tilmaami jireen waxaa uu noqday run taasna waxaa tusale inoo ah dowladaan uu markii loodortay ee sharciyan ahayd in ay dekto gudaha wadanka somalia ayaa hada waxaa inoo muqata in ay ka dhigatay saldhig dibadda wadanaka somalia ......dhankakale c/laahi maaha muwadin somalia oo jecel in uu wadanaka somalia helo kaladanbayn ,horumar ,iyo nabadgelo balse uu rabo in uu wadanku ku sii jiro dagaal sokeeye iyo qas .
Dadka wax garadka ah markay fiirsheen dowladaan ayey ku qiyaaseen in ay tahay dowlad itoopiya ay wadato oo lagu doonayo in lagu hantiyo dhulka somalia balse muwadinniinta somalia taas waxay ka xigaan huritaan dhiigoowda iyo maalkooda , shakhsi kastoo raba danta umada somaliyeed taas waxay la tahay in qilaabaan uu ku rabo c/laahi in uu gesho dowlada amxaarada ah ee itoopiya .
Ugu danbaytii waxaan umada somaliyeed meelkasta ay joogaan u soo jeedinayaan in ay ka soo wada jeensadaan haldhinac ,nooqdaan kuwo iyagu ismaamula ,kashaqayya xasiloonida wadanaka iyo nabadgelyada umadasomaliyeed ,horumarka wadanaka dhinackasta ha noqdee .
Waxaan kaloo umada somaliyeed ugu baqaayaa in anu la dagaalano amxaarada uu rabo c/laahi in uu soo gesho wadankeena hooyo taas oo ay ku doonayaan in ay ku hantiyaan dhulka mid ah wadanka somalia ...Itoopiya oo dano gaara kala leh wadanak somalia si ay u helaan DEKED IYO KHEERAD KALE .
Sidaa darteed waa in aynu ka soo horjeedsanaaa mowqifka uu wato c/laahi yuusuf ina galnaa dhaal ...taasina waxay ila ektahay in ay tahay jiihaad .